Dambiile Jwxo-shiil Ayey Warar Sheegayaan in uu Xijaabtay Badhtamihii Bishii February 2009 – Rasaasa News
Jul 27, 2009 dab la qodhiye, Jwxo-shiil
Diinta Islamku waxay qabtaa in mucjisooyinka dhaca Eebe loo daayo, hadii uu Bin,aadanku aad wax isaga weydiiyo arimahaas in ay suurto gal tahay in uu ruuxu Eebe Weyne ka fogaado, Mabaa,diida Shuuciyada ayaa waxay Qabtaa in dadku ayna war isweydaarsan karin balse uun ay samayn karaan waxa uu u sheego hogaankoodu, waana tii keentay Istalin oo dhintay in la waayo cid tidhaahda wuu dhintay.
Arintaas shuuciyadu qabto waxaa si cad u dhaxlay kooxda Jwxo-shiil, oo Eebe ka fogaanshuhu ay astaan u tahay, waxaad akhristaa warkan hoose oo xaqiiq ah walina la qarinayo.
Warar aad ugu dhaw xaqiiqada oo ka imanaya dhulka Somalida Ogadeeniya ayaa waxay lee yihiin, Jwxo-shiil iyo saddex nin oo la socotay waxaa loo malaynayaa in ay ku dhintay dagaal ka dhacay Sibi bishii February dhamaadkeedii meel magaalada Dhagaxmadow kaga quman dhinaca galbeedka.
Sidda ay wararku tibaaxayaan Jwxo-shiil iyo rag koox ah oo la socda ayaa waxa ay u yimaadeen reer, ree Ugaas kooshin ah, hal dhinaca waxaa reerka ka fadhiistay ciidan xoogaa ah oo ka mid ahaa ciidankiisa dhinaca kale ee reerkana waxaa fadhiistay rag dhawra oo uu isagu ku jiro. Waxaa rag reerka u diray ciidankii badnaa iyaga oo reerka ku yidhi waxaa nala socda Jwxo-shiil ee badhax iyo biyo kii aad noo heli kartaan nala soo gaadha.
Wax reerka wakhti gaaban ka hor ka tagay ciidanka Booliska Degaanka [dab la qodhiye] oo iyagu aad ugu raad taagnaa ciidamada uu watay Jwxo-shiil, reerka ayaa ilaalo hoosta ka diray odayaashiina waxay bilaabeen in ay u soo uruuriyaan badhax iyo biyo. Kolkii loo geeyey badhaxii ayey qaar ka mid ah ciidankii isaga la socday u sii qaadeen badhixii Jwxo-shiil, hadaba intii ay badhaxa sii wadeen ayaa waxaa ciidankii badnaa soo gaadhay ciidanka Booliska Cusub ee degaanka waxayna isweydaarsadeen rasaas xoog leh ciddanka Jwxo-shiil.
Waxaa kobtaas lagu dilay rag ay ka mid ahaayeen Cabdulahi Guud Cade, waxaa kale oo uu gaadhay dhaawac xun Jwxo-shiil laftigiisa oo ay haleeshay rasaas ka soo booday ragiisa, hadaba isaga iyo laba nin oo uu la socday ayaa waxaa ay ka fokadeen ciidankii kale.
Sida ay wararku shegayaan waxaa isaga la socday wiil ay iska soo raaceen Eritariya [reer Ugaas kooshin] oo u qaabilsanaa isgaadhsiinta, waxaana arkay baa la yidhi dad xoolo la jooga oo reer miyi ah, oo sheegay in ay arkeen saddex nin oo dhama,asan, waxayna u tilmaameen meesha biyo ugu dhaw. Saddex maalmood ka dib waxaa la arkay saddex ruux oo mayd ah oo u dhintay biyo la,aan.
Wararku waxaa ay sheegayaan in ciidanka Booliska [dab la qodhiye]loo sheegay in ay arintaasi jirto, kolkii la helay reerihii warkaa sheegayna, waxaa la garan waayey meeshi iyada ahayd, waayo dhulka waa dhul isu wada egg oo ay adag tahay sida loo garto, horuu u yidhi faylasuuf Somalida Ogadeeniya ah [Philosophy] “tubna ma leh tilmaan laguma helo tuurihii sibiye tamayuluqaleeyey Allow aadan tigaadoobin Yusuf Cilmi”.
Tan iyo intii xiligaas ka damabysay waxaan jirin wax war ah oo laga hayo Jwxo-shiil, waxaanuna in badan isku daynay in aanu helo meesha uu ku dambeeyey dambiile Jwxo-shiil, kol aanu xuuraan ahaan ku waydiinay xaaskiisa ayaa waxay sheegtay in uu hal mar oo kaliya la soo hadlay tan iyo intii uu galay dhulka Somalida Ogadeeniya January 3, 2009. Waxay sheegtay Afadu in uu xiligaas ku yidhi “tag tacsida Dr. Dolal qiima kasta ha kugu qaadatee” oo aan is lee yahay wuxuu uula jeeday yaan la ii malaynin in aan ka dambeeyey dilkiisa, waxaan filayaa ma fahmin haduu qariyo in aan Eebe qarinin “ninku fiquu dilay fiq fiquu dilay fiqi yaxyuu dilay”, sidaasina waxaa ay ku timid bay sheegtay amarkiisa iyada oo aan qalbi fiicnayn goobtii lagu hayey tacsida Dr.Dolal.
Intii xiligaasi ka dambaysay waxaan jirin wax dad ah oo sheega raq iyo ruux midna Jwxo-shiil. Waxaa hal mar siidaysay Ideecadii uu Jwxo-shiil, lahaa June 15, 2009 war been ah oo la isku kabkabay [fake clips], oo ahaa xiligii Daa,uud Axmaar lagu wareejiyey Maamulka kaalinka 5aad. Warkan oo uu isku kabkabay ninka sheegatada ah ee la yidhaahdo UULA ee dalka Denmarka, watana magaca beenta ah Cabdi Nuur Sheekh, waxaa kale oo iyagun dhawr goor soo qoray war iyo sawiro waa hore ah oo Jwxo-shiil laga qaaday xiligii ay u ahayd Barisamaadka.
Beenta iyo hoos u Ooygu waxaa ay ka mid yihiin calaamadaha munaafiqiinta lagu yaqaan, Waxaa u horaysay kooxda Jwxo-shiil in ay isku dayaan in ay qariyaan dilkii ay dileen Dr. Maxamed Sirad Dolal. Waxayna maanta taagan tahay in iyaga naftigooda ay is aamin waayaan in ay isweydiiyaan geeri iyo nolol kobta uu ku dambeeyey Mr Jwxo-shiil.
Dad dhalin yaro ah oo aan waxba garanaynin, ayaa waxay maalin walba qoraal been ah ku soo aakhara toosiyaan naf xisaabteeda aakharo dhamaatay, oo Eebe Weyne xaalkeeda og yahay.